Maraykanka oo ka hadlay Sababta Booqashada Xoghaye Kerry u dhaafi weyday Madaarka Muqdisho iyo doorashooyinka Soomaaliya ee 2016 |
Maraykanka oo ka hadlay Sababta Booqashada Xoghaye Kerry u dhaafi weyday Madaarka Muqdisho iyo doorashooyinka Soomaaliya ee 2016
Moqadisho (GNN)-Wasaaradda Arrimaha Dibedda Maraykanka, ayaa sheegtay inaanay suurtagal, ahayn in doorasho dadku codeeyaan ka suurtoobi karto Soomaaliya sannadka 2016, balse qaabkii kale lagu dooran karo loo marro.
Afhayeen Marie Harf u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibedda oo wax laga weydiiyey sababta Xoghayaha Arrimaha Dibedda John Kerry u dhaafi waayey gudaha Madaarka Muqdisho, ayaa sheegay inaanay lahayn kalsooni ay ku geeyaan meel ka baxsan Madaarka oo halis ammaan iyo farsamo labadaba jiraan.
Mar la weydiiyey Ms Harf, saadaashooda doorashooyin ka dhaca Soomaaliya, marka loo eego xaaladaha taagan iyo wakhtiga 18 bilood ee hadhay ayey ku jawaabtay; “Doorashooyin ma qabsoomi doonaan sidaan filayo. Waxaan ku cadaadinaynaa Xukuumadda Soomaaliya inay isu diyaariyaan qaab ay ku gaadhaan Xukuumad lagu doorto cod ama xulitaan sidii hore u dhacday. Waxaan qabaa inay adkaan doonto sannadka 2016, oo la saadaalinayo in doorashooyin ka qabsoomaan, laakiin, markaan xaqiiqada ku soo dhawaan, ma noqon doonaan doorasho dadku codeeyaan, sidaynu rejeynayno.”
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Harf oo la weydiiyey sababta booqashada Xoghayaha arrimha dibedda Maraykanka Mr. Kerry u dhaafi weyday Madaarka Muqdisho ayaa ku jawaabtay; “Waa sidaa, waxaan ula jeedaa way nagu adag tahay, dhinaca Farasamada iyo Amaankaba. Waxaan qabaa inaannaan lahayn kalsooni aannu ku geyno dibedda Madaarka.”